Mampiasa teknolojia ny orinasam-pitaterana mba hifaneraserana amin'ny mpanjifa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Mampiasa teknolojia ny orinasam-pitaterana mba hifaneraserana amin'ny mpanjifa
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • Tourism • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Ny andraikitry ny teknolojia dia matetika midina amin'ny fanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa amin'ny Internet sy ivelan'ny aterineto sady manampy amin'ny fampihenana ny fandaniana, ary ny tatitray dia mampiseho fa ireo mpamily ireo dia hihamatanjaka kokoa rehefa miverina ny dia.
Ny orinasam-pivezivezena dia hijery ny fomba fampiasana ny teknolojia hifaneraserana amin'ny mpanjifa amin'ny Internet, hoy ny fikarohana navoaka androany (Alatsinainy 1 Novambra) nataon'i WTM London sy Travel Forward.
Manodidina ny 700 eo ho eo ireo mpanatanteraka ambony avy amin'ny indostrian'ny fitsangatsanganana no nanontaniana ny fomba niova ny paikadin'izy ireo teknolojia noho ny Covid. Ny enina amin'ny folo (60%) amin'ny santionany dia nilaza fa mitady fomba hanompoana mpanjifa bebe kokoa amin'ny Internet fa tsy amin'ny olona.
Efa ho ny antsasany (48%) no hampiakatra ny fahalianany amin'ny fampiasana teknolojia hanatsarana ny traikefa ankapoben'ny mpandeha, ao anatin'izany ny fifaneraserana ivelan'ny aterineto ary koa ny resaka nomerika.
Ny isan-jaton'ny kely kokoa (41%) dia hikaroka fomba hampihenana ny fandaniana amin'ny teknolojia.
Mifandray ny tanjona. Ny fampitomboana ny safidy ho an'ny mpandeha amin'ny fanompoana tena, na omena an-tserasera tsy mila mifandray amin'ny foibe antso, dia traikefa mpanjifa tsara kokoa. Saingy mampihena ny fifamoivoizana mankany amin'ny foibem-pifandraisana ihany koa ity teknolojia ity, izay midika fa ny mpiasa dia afaka mifantoka amin'ny fikarakarana fanontaniana izay tsy azo automatique. Tsy ahena fotsiny ny vidiny fa atao tsara ihany koa.
Ny automatique dia faritra iray ilain'ny zotram-piaramanidina, indrindra indrindra, ny fampiasam-bola, hoy i McKinsey. Nomarihiny fa tokony hijery ny automatique manoloana ny mpanjifa ny mpitatitra, toy ny kioska manokan-tena eny amin'ny seranam-piaramanidina ary koa ny automatique amin'ny biraon'ny asa toy ny kaonty fidiram-bola sy ny faktiora.
Any an-toeran-kafa, ny The WTM Industry Report dia nanamafy ihany koa fa nanova ny tontolon'ny paikady teknolojia ho an'ny orinasa fitsangatsanganana rehetra i Covid. Orinasa latsaky ny iray amin'ny folo (9%) no nilaza fa ny paikadin'izy ireo amin'ny ho avy dia hitovy amin'ny talohan'ny fipoahana, ka ny 3% no tena nilaza fa nivoaka tamin'ny valan'aretina izy ireo ary nanapa-kevitra ny hametraka kely kokoa ny teknolojia. .
Simon Press, Talen'ny Fampirantiana, WTM London sy Travel Forward, dia nilaza hoe: “Matetika ny andraikitry ny teknolojia amin'ny fanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa an-tserasera sy ivelan'ny aterineto sady manampy amin'ny fampihenana ny vidiny, ary ny tatitray dia mampiseho fa ireo mpamily ireo dia hihamatanjaka kokoa rehefa miverina ny dia. .
"Saingy angamba ny fandroahana lehibe indrindra dia ny manodidina ny 90% amin'ny santionay no nilaza fa ny paikadin'izy ireo teknolojia ho an'ny taona 2022 dia niova vokatry ny fipoahana, izay vaovao tsara ho an'izay rehetra manatrika, mampiseho na mitsidika ny WTM London sy Travel Forward amin'ity taona ity, izay eo an-tanana ireo mpamorona ny indostria hizara ny heviny sy ny fahaizany. ”